ကျောင်းသားများ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးမှု နှင့်ပါတ်သက်သော စစ်ဆေးပုံများ အကြောင်း ဟောပြောပွဲနှင့် RWCT ဆရာဆရာမများ တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ် | B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association
← ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးကာလတွင် ဆရာ/ဆရာမများကြုံတွေ့ရသည် အခက်အခဲများ
Korea Hija students and CDC students did exange caulture ceremony at the CDC school Maesot ,Tak →
ကျောင်းသားများ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးမှု နှင့်ပါတ်သက်သော စစ်ဆေးပုံများ အကြောင်း ဟောပြောပွဲနှင့် RWCT ဆရာဆရာမများ တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်
Posted on January 25, 2010	by bmta05
ဇန်နဝါရီ ၂၅။ မဲဆောက်
စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေး သင်ကြားပေးမှုနှင့်ပါတ်သက်သော စစ်ဆေးပုံများနှင့် RWCT (Reading , Writing , Critical thinking Training ) တက်ရောက်ပြီးသော ဆရာ ဆရာမ များ၏ အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်သည့် ပွဲကို မဲဆောက်မြို့ CDC (Children Development Center ) တွင် ယနေ့နံနက် ၉နာရီမှ ညနေ ၄နာရီအထိ ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
ထိုအခမ်းအနားသို့ CDC ကျောင်းမှ ဆရာဆရာမများနှင့် RWCT သင်တန်းဆင်းပြီးသူ မဲဆောက်ဒေသရှိ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်း အသီးသီးမှ ဆရာဆရာမပေါင်း တစ်ရာကျော်ခန့် တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အတူ BMTA ၏ နာယကတဦးနှင့် မယ်တော် ဆေးခန်း၏ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ ရေမွန်မက်ဆေးဆေး ဆုရှင် ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်မှ တက်ရောက် ချီးမြှင့် နုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားပေး ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်မှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားနေစဉ်
ဆရာမMary Wootten မှရှင်းလင်း ပြောကြားနေစဉ်
ဆရာ ဒေါက်တာသိန်းလွင်မှ ရှင်းလင်း ပြောပြနေစဉ်
ဆရာ Steve Wootten မှ ရှင်းလင်း ပြောကြားနေစဉ်
BMTA ဥက္ကဌနှင့် CDC ကျောင်းအုပ်ကြီး
ထူးခြားချက်တခုမှာ ပြည်တွင်းတွင် RWCT နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု သင်ကြားပေးနေသော ဆရာဆရာမ အချို့လဲ တက်ရောက်ကြပြီး သူတို့၏ အတွေ့ အကြုံများကို ရှင်းလင်းပြောပြ ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နံနက်ပိုင်းတွင် University of Newcastle မှ ဆရာမတဦး ဖြစ်သူ Mary Wootten နှင့် သူမ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Steve Wootten တို့က စာသင်ကြားနေစဉ် စစ်ဆေးပုံများကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းပြောပြသွားခဲ့ပြီး သင်ကြားပြီး စစ်ဆေးပုံများနှင့် ပါတ်သက် ၍လည်း ရှင်းလင်း ပြောပြသွားခဲ့ပါသည်။
နေ့လည်ပိုင်းတွင်ဆရာ ဒေါက်တာသိန်းလွင်မှ RWCT နည်းလမ်းသစ်တခုဖြစ်သော Academic Controversy (ပညာရှင်များငြင်းခုန်ဆွေးနွေးပွဲ) အကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောပြ သရုပ်ပြ လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် RWCT သင်တန်းဆင်း ဆရာ ဆရာမများက သူတို့၏ RWCT နည်းစနစ်သုံး၍ သင်ကြားရာတွင် တွေ့ရှိရသည့် အတွေ့အကြုံ များကို ရှင်းလင်း ပြောပြ၍ အတွေ့အကြုံများကို ဖလှယ်ကြပြီး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခဲ့ကြ ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် RWCT နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ သင်ကြား နေကြသော ဆရာ ဆရာမများ၏ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးချက်များ အပေါ် မဲဆောက်ဒေသရှိ ဆရာ ဆရာမများက အထူး စိတ်ဝင်းစားစွာနှင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသလို ဝိုင်းဝန်း အကြံပြု ခဲ့ကြပါသည်။
This entry was posted in သတင်း. Bookmark the permalink.
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ ဆရာမများအစည်းအရုံး (BMTA) ၏ ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်